Nnọọ n´obodo Austria! – FS Easy Way
Ihe nke mbụ
Ihe mmadụ kwesịrị ịma na uru ha bara
Ọchịchị Onye kwuo uche ya
Asụsụ German na Mmụta (Nzụlite)
Nke bụ Eziokwu nakwa ebe mgbado ụkwụ
Nwoke na Nwanyị
Ịgba-Mbọ na Ahụisike
Mmekọ Mmadụ n´ibe ya, Ụlọ Obibi nakwa ihe gbasara Mgbe Mmadụ nwere ohere
Iwu Obodo na Nkwanye Ugwu
Nchekwa ihe ekereke (elu, ala, mmiri, ikuku) nakwa nchekwa ụmụ Anụmanụ
Akwụkwọ eji arụ ọrụ
Udi Ọrụ dị icheiche
Ihe gbasara Ahụisike
Mkpuchi ugwọ Ụlọgwụ (health insurance coverage) nakwa Ego nlekọta ahụ
Ihe ndị mmadụ kwesịrị ịma tupu ọhụ Dọkịta
Usoro ịgụ akwụkwọ
Ịgụ akwụkwọ maka ndị okenye
Ịmụ Asụsụ German
Ịnabata Akwụkwọ Asambodo
Social:Nlekọta ọdịmma mmadụ
Ndị ọrụ ha bụ nlekọta ọdimma ndị mmadụ
Enyemaka ego dx icheiche
Udi Ülö obibi dx icheiche
Ụlọrụ Ndị Ọchịchị
Akwụkwọ eji anya ụgbọala
Ndebanye akara Adres ebe obibi
Impressum (Akara)/Amụma Nzuzo
Nnọọ n´obodo Austria!
Achọpụtara n´isi obodo ọzọ, nke anọghị niime Europe m´ọbụ niime Switzerland, bata. Ị chọkwara iji obodo Austria mere ebe obibi gị. Obi dị anyị ụtọ maka anya ịhụrụ obodo anyị, anyị ji obi anyị na-asịkwa gị nnọọ.
Iji wee nọọ nke ọma n´obodo ọhụrụ gị, mmadụ ga-amarịrị iwu na ihe ndị ọzọ dị mkpa e nwere n´obodo ọhụrụ ya bụ Austria. Nke a mere anyị ji depụtere gị iwu ndị a niile nakwa ihe ndị ọzọ dị mkpa i kwesịrị ịma, n´ebe a.
FS Easy Way: Ụzọ dị nso (nkenke) iji nweta ozi m´ọbụ ọkwa dị mkpa.
fs-easyway.at ga-eme ka i nweta ozi si n´ụlọọrụ ndị ọchịchị na-ahụ maka Ọrụ, Ahụisiike, Ọzụzụ (Ụlọ-Akwụkwọ), Ndị-Enyemaka, Ụlọ-Obibi na Ụlọọrụ ndị nwe obodo. Mgbe ọbụla, akwụkwọ ọgụgụ newspaper a na-akpọ Wissen und Werte na-edepụta ihe bara uru dị iche iche mmadụ nwere ike isi n´obodo Austria e nweta, ọ na-edekwa maka etu esi a kpachapụrụ ugwu dịịrị mmadụ anya nakwa uru ọ bara mmadụ ị mata ihe ndịa niile mgbe ọ bịara ọhụrụ.
Mgbe ị batachara n´obodo Austria, e nwere ihe nde dị iche iche ị ga-emerịrị.
N´ebe a ka ị ga-apị aka iji mata ihe mbụ (izizi) ndị a.
Pịa n´ebea ka ịgụọ ihe ndị ọzọ gbasara Easy Way na otu Fair und Sensibel Ọsterreich.
Were akara office@fairundsensibel.at degara ndị otu `Fair und Sensibel Ọsterreich´ akwụkwọ maka ajụjụ ndị ọzọ i nwere ịjụ.
FS Easy Way © 2011-2021 by Verein Fair und Sensibel · Impressum · Kontakt